Niknayman: May 2008
မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်တွေကို လှူတဲ့ နအဖရဲ့ ကူညီမှု။
ဆီတပုလင်း၊ ကြက်သွန်နီတစ်ဥ၊ အာလူးတစ်ခြမ်းနဲ့မားမားခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ် ဖြစ်ပါသတဲ့ဗျာ။
နိုင်ငံတကာက လှူဒါန်းလာတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ပစ္စည်းများ ဘယ်များရောက်ကုန်ပါလိမ့်။ မြန်မာပြည်ဖြစ် မားမားခေါက်ဆွဲထုပ်က အစားရောက်လာပြီး၊ အာလူးတစ်ခြမ်းကလည်း ဘယ်လို မကုန်အောင် စားရပါမလိမ့်။
ပုဂံနက်က အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်စနစ် အသစ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုဆောင်းရရှိသမျှကို ပြန်လည်ဖြန့် ဝေ အသိပေးလိုတာကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပ်ြလိုက်ပါတယ်။ ရေးသားဖေါ်ပ်ြသူများကို တစ်ဦးချင်းအမည် မဖေါ်ပြဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို Direct Connection အနေနဲ့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ကွန်နက်ရှင် Direct Connection သုံးချင်ရင် Tools ထဲက Options/Network/Settings ထဲကမှ Direct Connection to Internet ဆိုတဲ့ check box လေးကို ရွေးလိုက်ရုံပါ။
ဒီ တိုက်ရိုက်အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကတော့ -
- လူသစ်တွေအတွက် သုံးရတာ ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။ များသလောက် မကောင်းတဲ့ proxy နံပါတ်တွေ ပြောင်းစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။
- ကွန်နက်ရှင် ( အရင်ကထက် နည်းနည်း ) ပိုမြန်သလို ခံစားရပါတယ်။
- ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
- ၀က်ဆိုဒ်အတော်များများကို ဘန်း (Ban) ထားပါတယ်။
- proxy အတော်များများ လည်း ဘန်း (Ban) ခံထားရပါတယ်။ Gmail လည်း ဘန်းထား
- Proxy နဲ့တုန်းကဆို နှေးသာနှေးတာ၊ စိတ်ရှည်ရင် အလုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်၊ အခုကျတော့ Access has been denied မြင်နေရပါတယ်။
- Freedom ဖရီးဒမ်း ကို ခံသုံးလို့ မရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
- လုံခြုံစိတ်ချရလားဆိုပြန်တာ့လည်း ဘယ်သူမှ အာမခံရဲမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ( ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ဘာအကြံရှိလို့ ဒီလို တိုက်ရိုက်ကွန်နက်ရှင်ကို ပေးသုံးတာလဲလို့တောင် သံသယ ပိုဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ပြည်သူကိုချစ်လို့တော့ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။)
- သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ အထူးသတိထားလေ့လာပြီးမှ သုံးစွဲပါလို့သတိပေးလိုပါတယ်။ မိမိတို့ ကြည့်ထားတဲ့ စာမျက်နှာများ ကျန်မကျန်ကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
- Highest anonymous proxy တွေကို သုံးကြည့်ပါ. တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်မချရတဲ့ proxy များကတော့ မသုံးတာကောင်းပါမယ်။
- Ultra Surf နဲ့သုံးကြည့်ပါ။ ရ မရ။ Proxies Setting မှာ Direct use ultrasurf ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပြီး သုံးကြည့်ပါ။ Ultra Surf ဆော့ဝဲ မရှိသေးသူများ ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ http://www.mediafire.com/?fkmzutm1nmd
- Gmail ကို https နဲ့အလုပ်လုပ်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
- ISA ခံထားသော server ဖြင့် သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ISA server က webchanting မှာ direct connection ကို ပြောင်းလိုက်ပါ။ Proxies Setting မှာ direct connection or server IP တစ်ခုထဲကိုဘဲ ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
- အကယ်လို့Direct Connection နဲ့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Network Error (tcp_error) ဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်းပြလာရင် Refresh ကို နှိပ်ပါ။
A communication error occurred: "" The Web Server may be down, too busy, or experiencing other problems preventing it from responding to requests. You may wish to try again atalater time. For assistance, contact your network support team.
ဆာဗာ Server အသစ်ဖြစ်လို့Cache ထဲမှာ မရှိသေးလို့ ပါ။
- ပုဂံ proxy အစား www.proxy4free.com ကို သုံးကြည့်ပါ။ ရ မရ။ ပုဂံနက်ဆာဗာပြောင်းလိုက်ပေမယ့် ဆက်သုံးလို့ ရနေသေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
- ပုဂံနက်သုံးစွဲသူများ သေချာစွာလေ့လာပြီးမှ မိမိတို့ လုံခြုံရေးအတွက် သတိထား သုံးစွဲကြဖို့အသိပေးလိုပါတယ်။
Posted by Niknayman at 4:39 PM
Posted by Niknayman at 7:16 AM
နိုင်ငံတော်သိက္ခာကျရတာ နအဖကြောင့်။ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကြောင့် မဟုတ်ပါ။
လေဘေးသင့်ိဒုက္ခသည်များရှိရာသို့သွားရောက် လှူဒါန်း ပြီးပြန်လာသော ကားများအား ရန်ကုန်တိုင်းအ၀င်ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ အထက်ပါ စာများ ပေးဝေလျက် ရှိနေပါတယ်။ ထိုလက်ကမ်းစာစောင်ပါ ရေးသားချက် များသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါသည့် ဒါဏ်ကို မခံနိုင် ကြပဲ ထမင်းတလုပ်ကို မရှက်မကြောက် တောင်းရမ်းစားသောက်နေကြရသည့်ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ထားစာနာစိတ်မရှိသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ လူမျိုးတို့ သည် အင်တန်မှ အရှက်အကြောက် ကြီးမားသည်ကိုလည်း ပြည်သူများ သိကြပါသည်။ သို့ သော် ၎င်းစာပါ (မူလ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ကို ပျက်ပြားစေပါသည်) ဟူသောအချက်အား ပြောရလျှင် လေဘေးဒဏ်ခံရသောဒေသများရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ အဓိက အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ လေဘေးသင့် ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် လယ်ယာလုပ် ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသူများအဖို့ခိုင်းစရာ ကျွဲ နွားမရှိ ၊ စိုက်စရာ မျိုးစပါးမရှိ ၊ စားစရာ ၀မ်းစာစပါး မရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်များမှာလည်း ရေဖုံးလွမ်းလျက် ရှိနေပါသေးသည်။ ထိုဒုက္ခသည်များ၏ လတ်တလော ၀မ်းရေးတနပ်စာကိုပင်လျှင် မည် သို့ ဖြေရှင်းကြရမည်နည်း။
တိုင်းပြည်ကို မတရားအုပ်ချူပ်နေသော နအဖအနေဖြင့် လည်း ထိရောက်သော ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသလား။ နအဖအနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ရင် လေဘေးသင့် သည့် ကိစ္စအား ဖုံးကွယ်ထားချင်နေ ခဲ့သည်၊ မျက်ကွယ်ပြုချင်နေခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးမှု့ တွေ ကြီးမားလွန်းလို့နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်လာသောအခါမှသာလျှင် နအဖက ယခင်ပြောထားသော ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြီးဆုံး သွားပါပြီ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်သာ ကျန်ပါတော့ သည်ဆို ပြီး ခပ်တည်တည် နှင့်နိုင်ငံတကာကို လိမ်ညာခဲ့ သည်များမှာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်ပါတော့ သည်။
ယခုအချိန်တွင် နိုင် ငံတကာမျက်မှောက်မှာ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်လွန်းလို့တောင်းရမ်းစားသောက်နေရတာ တွေြ့ပန်တော့ လည်း တောင်းစား နေရတဲ့ သူတွေက မရှက် ရဘဲ၊ တာဝန်ကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ သူတို့နအဖကဘဲ ပြန်ပြီး ရှက်နေပြန်သေးတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေဆီကလည်း ဖြတ်ဘုံးထားတာတွေလည်း ပေါ်ကုန်ပြီ။ ဘယ်အလှူရှင်ကမှလည်း နအဖနဲ့လက်ပါးစေတွေကို မယုံကြည်ကြဘူး။ လမ်းခုလပ်ကနေ တားဆီးလုယူလိုတဲ့ သူတို့နအဖလက်ပါးစေတွေ လက်ထဲတော့အလှူပစ္စည်းတွေ မထားခဲ့ နိုင်ဘူးဆိုပြီး လာတဲ့ အလှူကားတွေ ပြန်လှည့် သွားကြလို့ ၊ ကာလမ်းတလျှောက်ရှိ ကားလမ်းဘေးဝဲယာ မှာရှိကြတဲ့ ကျေးရွာများမှ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေ ထမင်းတစ်နပ် ရေတစ်ခွက်အတွက် ငတ်မရှက်ဖြစ်ရပြီး ဘ၀အသက်ဆက်ရဖို့ အတွက် အလှူရှင်တွေကို မျှော်ပြီး လာရောက်တောင်းရမ်းကြရတာပါ။
တကယ်ဒုက္ခရောက်လို့ငတ်နေကြလို့ရိုးရိုးသားသား လာရောက်တောင်းစားတာဟာ နိုင်ငံတော်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ တကယ်ဂုဏ်သိက္ခာကျစေတာက တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူကို ဒုက္ခပေါင်းစုံပေးနေတဲ့ နအဖတွေရဲ့အသုံးမကျမှု၊ လစ်လျူရှုမှု၊ တာဝန်ကင်းမဲ့မှု၊ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းမှု၊ ခိုးယူတောင်ရမ်းမှုတွေ လုပ်နေကြတဲ့ နအဖတွေနဲ့လက်ပါးစေတွေကြောင့်သာ နိုင်ငံတော်ဂုဏ်သိက္ခာကျရတာပါ။ ဒါကို ငပြူးက ငပြဲပြန်လုပ်ပြီး မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခသည်အစစ်တွေကိုများ၊ နိုင်ငံတော်ကျက်သရေယုတ်တွေဖြစ်တဲ့ နအဖတွေကများ ပြန်ပြီး လက်ညှိုးထိုးနေတာ အတော်ဆိုးလှပါတယ်။
အခုလည်း အဲ့ဒီစာထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ ခယက၊ မယက ၊ရယက များနှင့်ဆက်သွယ် လှူဒါန်းပါတဲ့ ။ သူတို့ ကို ဘယ်အလှူရှင်ကမှ လုံးဝကို မယုံကြည်ကြဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း မယုံကြည်ကြဘူး။ အဲ့ဒီတော့ လှူဒါန်းလိုတဲ့ အလှူရှင်တွေက နအဖတွေ နဲ့မပါတ်သက်ချင်လို့မလှူဒါန်းကြရင် ဒုက္ခသည်တွေဘဲ ငတ်သထက်ငတ်ကြရပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် နအဖအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပက အလှူရှင်တွေကို ဘာမှ ကန့် သတ်တာ တားဆီးတာ ချုပ်ချယ်တာ နှောင့်ယှက်တာ မရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှူဒါန်းခွင့် ပြုသင့် ပါတယ်။
အခုလို ပြည်သူတွေထဲက မိမိတို့တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လှူဒါန်းကြတာလည်း နအဖ မလုပ်နိုင်တဲ့၊ နအဖဘဲ လုပ်မနိုငတဲ့ တာဝန်တစ်ရပ်ကို ပြည်သူတွေကနေ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့အသိစိတ်ဓါတ်ရှိစွာနဲ့ ကူညီနေကြတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိဘဲဖြစ်တယ်။ မိမိလူမျိုးတို့ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျစေရန် ဘယ်ဒုက္ခသည်မှ ဘယ်အလှူရှင်မှ ရည်ရွယ်ပြီး အလှူခံနေတာ လှူဒါန်းနေတာ မဟုတ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက် ရ ပါတယ်။
ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပက လှူနေကြတဲ့ အလှူငွေတွေ အလှူပစ္စည်းတွေကို နအဖနဲ့ ဘက်တော်သားများက ကိုယ်ကျိူးအတွက် ဖြတ်စားလပ်စားလုပ်နေတာတွေ၊ တကယ်ကူညီတာမဟုတ်ဘဲ နာမည်ကောင်းယူရေးအတွက် အလှူရှင်လက်ဘက်နဲ့မျက်နှာကောင်းလုပ်နေတာတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘန်းပြပြီး နအဖက နိုင်ငံခြားငွေတွေကို သူတို့ လက်ထဲ တိုက်ရိုက်ပေးဖို့ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီးတောင်းခံနေတာတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ ကိုလည်း ပြောလိုပါတယ်။
Posted by Niknayman at 8:46 AM
ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးမှ ပြောပြချက်။
ကျွန်တော်တို့ချီတက်ဆန္ဒပြဖို့ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြင် ဆင် နေ ကြ တယ်။ နေ့ လည် (၁) နာ၇ီကျော်ကျော်လောက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် ရုံးရှေ့ မှာ တန်းစီပြီ စတင်ဆန္ဒ ပြ ကြ ပါတယ်။ ပြီး တာ နဲ့အရှေ့ ဘက် ရွှေဂုံတိုင် မီး ပွုင့်ဘက် ကို စီတန်း ပြီး လမ်း လျှောက် ကြ တယ်။ အဲ့ ဒီအချိန် မှာ မိုးက လည်း ပို ကောင်း လာ တယ်။ ကင် မရာ သမားတွေ လဲ မိုးထဲ မှာ ပဲ အပြေး အလွှား ရိုက် နေ ကြ တယ်။ ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘုံ ကျောင်းရှေ့ရောက် တော့လုံထိန်းကားတစီး ထွက် လိုက် လာ တယ်။ သူတို့က လမ်း တဖက် မှာ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက ဒီဘက် မှာ ဆန္ဒပြချီတက်နေကြတယ်။
လုံထိန်း ကားတွေက ဗဟန်း ဆက် သွယ်ရေး ရုံးရှေ့မှာတင် (၆) စီးလောက် ရှိပါတယ်။ နောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်ရုံးရှေ့က လမ်းကြားလေးမှာ ရဲ ကားက (၆)စီး၊ မီးသတ်ကားလည်း ရပ်ထားပါတယ်။ ယုဇနဟိုတ.ယ်ရှေ့မှာ အချုပ်ကားပါတွေ့ ရပါတယ်။
ပြီးတော့ရွေဂုံတိုင် မီး ပွိုင့်ရောက် တော့ကျွန်တော်တို့ ထဲက ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်လာ တဲ့အဖွဲ့ က လမ်း ရဲ့ ဘယ် ဘက် ကို ကွေ့ လိုက် တယ်။ ဒီလို နဲ့အိပ်ဇဲ တာဝါ ရှေ့ ရောက် လာ တယ်။ အဲ့ ဒီ မှာ ဗဟန်း ဆက် သွယ် ရေး စခန်း ရှေ့မှာ ကြိုတင် စောင့်နေတဲ့ လုံ ထိန်း ကား တစ်စီး ထွက် လာ တယ်။ နောက် နံပါတ် (၁၀၅) လိုင်းကားပေါ် မှာ အရပ် ၀တ်တွေ နဲ့ရဲတွေ လိုက် ချ လာ တယ်။
ဟာမစ် တစ် မှတ် တိုင် ရှေ့လဲ ရောက် ရော ရဲ ကားတွေ လုံ ထိန်း ကားတွေက ရပ် လိုက်ပြီး၊ အထဲက သူတို့တွေ ကားပေါ် က ဆင်းလာကြတယ်။ ပြီးတော့လူငယ်တွေ တန်းစီလျှောက် နေတဲ့ လမ်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကို ကူးလာကြတယ်။
ပထမဦးဆုံးကတော့ ရှေ့ ဆက်ချီတက်ဆန္ဒမပြကြဖို့တားတယ်။ နောက်တော့ ဒိုင် နာ ကား ပေါ် ကို ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ဆွဲ တင် သွားကြ တော့ တာ ပါဘဲ။
ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ ဆန္ဒပြသွားကြသူများထဲမှ အဖမ်းခံရသူများစာရင်း။
၁။ ထွန်းထွန်းဝင်း (စမ်းကျောင်းတာဝန်ခံ - ၁)၊
၂။ ရန်နိုင်းထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်တာဝန်ခံ - ၁)၊
၃။ ကျော်မျိုးနိုင် (တာမွေတာဝန်ခံ - ၂)၊
၄။ ကိုထွန်းဝင်းသိန်း (မင်္ဂလာဒံ)၊ု
၅။ ကိုလှမျိုးနိုင် (မင်္ဂလာဒုံ)၊
၆။ ဆရာအောင်ဖေ (တွံ့တေး)၊
၇။ ထက်ထက်ဦးဝေ (ရွှေပြည်သာ)၊
၈။ မျိုးကျော်ဇင် (လှိုင်သာယာ)၊
၉။ သက်နိုင်ထွန်း (လှိုင်သာယာ)၊
၁၀၊ ဆန်းနိုင် (လှိုင်သာယာ)၊
၁၁။ ကျော်နိုင် (လှိုင်သာယာ)၊
၁၂။ ပြည့်ပြည့် (စမ်းချောင်း)၊
၁၃။ ထက်စိုးလင်း (ဒလတာဝန်ခံ - ၁)၊
၁၄။ စောပြည့်ဖြိုးအောင် (ဒလ)၊
Posted by Niknayman at 6:02 PM
ဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ဆီသို့ချီတက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ NLD အမျိုးသမီးအဖွဲ့ နဲ့ လူငယ်တွေပါ။
ကျွန်တော်တို့လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုနေရုံနဲ့ မရ၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက နအဖကို တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်တွေ့ကြိုးစားရာရောက်မယ်။
Posted by Niknayman at 10:34 AM
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကြီးမှလည်း တစ်ဆင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၈၇ လမ်း၊ ၃၆x၃၇ လမ်းကြား၊ မန္တလေး။
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ နယ် (တော်ခရမ်းလေး) မှ ဓါတ်ပုံများ။
(ဓါတ်ပုံများ ပေးပို့ လာသော မြေသြဇာအဖွဲ့ အား ကျေးဇုးတင်ရှိပါသည်)။
Posted by Niknayman at 4:35 PM
ဘာလည်းဗျ။ ဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာ။ ပြောပုံကတမျိုး လုပ်နေကြတာက တမျိုးပါလား။ လူတယောက်ချင်းစီ ရဲ့ဆန္ဒကို လူကြုံထည့်ပေးလို့ ရလား။ ကိုယ်စားထည့်ပေးလို့ ရ လား။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ရပ်ကွက် အာဏာပိုင်တွေက ခင်ဗျားတို့ မဲရုံကို မလာနိုင်ရင်လဲ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စား ကျနော်ဘဲ မဲ ထည့် ပေးလိုက်ပါ့ မယ်ဆိုပြီး ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေ ပုံစံလုပ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် မဲအစားထည့်ပေးလို့ရမလား။
လျွှိဝှက်မဲပေးစနစ်ဆိုတာ မိမိကလွဲရင် တခြားမည်သူတဦးတယောက်မျှ သိခွင့် မရှိ ကြရဘူးဆိုတာ နားမလည်ကြဖူးလား။ အခုဟာကတမျိုးပါလား။ ကျနော် မဲသွားထည့်တော့မဲရုံမှူးကို ကျနော်ပြောတယ် အိမ်က ကျနော့်မိသားစုတွေ ခရီးထွက်သွားကြတယ်ဆိုတော့၊ မဲရုံမှူးတစ်ယောက်က “ဒါဆိုရင် မင်းပဲသူတို့ ကိုယ်စား ထည့်သွားလိုက်ပေါ့ တဲ့။ မင်းဘာထည့်ရမှန်း မသိရင် ငါတို့ထည့်ပေးလိုက် ပါ့ မယ်တဲ့ ” အဲ့ဒီလို မဲဆန္ဒပေးလို့ရ လို့လား။ ကျနော်တော့နားလည်ထားတာက တစ်မျိုး သူတို့ လုပ်နေတာတွေ က တစ်မျိုး မြင်တွေ့ ခဲ့ ရ တော့စဉ်းစားမိတယ်။ မဲရုံမှူးးသင်တန်းမှာ အခုလို အချက်တွေ သင်ခဲ့ရလားပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုသူတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်မသမာမှုတွေ နဲ့အနိုင်ယူချင်ကြလို့ကလိမ်ကကျစ် နည်းတွေကို မဲရုံ မှုးများကို ပို့ချခဲ့ လေသလား။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လည်း လူတချို့က ကိုယ့် ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဘကြီးနွားကျောင်းနေတဲ့ သူတွေ ရှိ နေ တယ် ဗျ။ ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် ကိုယ်သိက္ခာကို အကျခံတာ အံ့ပါရဲ့ ဗျာ။ ပုံမှာပါရှိတဲ့မဲ ရုံ မှုး နှစ်ဦး ကတော့ညနေ မဲရုံပိတ်အပြီးမှာ အရက်ဆိုင်သို့ ရောက်လာပြီး ဘယ်သူတွေ က ကြက်ခြေခတ်ထည့်သွားတဲ့အကြောင်း၊ အဲ့လို ကြက်ခြေခတ်ထည့်သွားသူတွေကို မှတ်ထားကြောင်း၊ အဲ့ဒီသူတွေကို နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြသနာရှာမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းများကို အရက်ဆိုင်အတွင်းမှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား လေလုံးထွားစွာနဲ့စွာပြောဆိုနေတာကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် နားနှင့်ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ ရ ပါတယ်။
ဒီလို ပြည်သူများက မိမ်ိဆန္ဒအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ရာမှာ အငြိုးအတေးတွေထားခွင့် ရှိပါသလား။ အဲ့ဒီလို ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုနေကြတဲ့သူများကိုလည်း အခြခံဥပဒေ ရေးဆွဲနေသည့်သူများက ဥပဒေကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထား ကြပါသလား ဆိုတာကိုတော့တစ်ဆင့် စကားတစ်ဆင့် နားနှင့်ပြော ပြကြစမ်းပါဗျာ။
Posted by Niknayman at 10:17 PM
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (မေလ ၂၃၊ ၂၀၀၈)။
Posted by Niknayman at 7:06 PM
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူကောက်ခံမှု။
ယခုလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတာ လေးစားပါတယ် မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ။
Posted by Niknayman at 8:57 AM
မြန်မာပြည်မှ မုန်တိုင်းဘေးဒဏ်သင့်ကလေးများအတွက် ကူညီမှု။
Bunnings Warehouse ဟာ သြစတြေလျတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ထင်ပေဓကျော်ကြားတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည် နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးဒဏ်ခံရသူ ကလေးသူငယ်များကို ကူညီဖို့အတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့လုပ်ကြပါတယ်။ အစားအသောက်ရောင်းချပြီး ရလာတဲ့ငွေများအားလုံးကို Save The Children ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကနေ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဒုက္ခသည်ကလေးများထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သွားရောက်ကူညီနေတဲ့ Save The Chilredn အဖွဲ့ ခွဲကနေ တစ်ဆင့် ကူညီမှုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ မျိုးချစ်မြန်မာများလည်း သွားရောက်အားပေးကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
(သတင်းပေးပို့ လာတဲ့ ကိုသီဟအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်)။
Posted by Niknayman at 9:13 AM